na ku saabsan - Foshan Tongyida qaadayso Qalabka Co., Ltd
Foshan Tongyida qaadayso Qalabka Warshadaha Co., Ltd takhasusay design, soo saaridda iyo sahayda ee u qaadaya iyo qalabka intay.
5 sano ka dib markii horumarinta, maanta waxaan nahay mid ka mid ah shirkadaha ugu horeeysa in our beerta, waxaan leenahay 100 shaqaalaha kooxda xirfadeed baaluq design, kooxda kormeerka tayada, kooxda maamulka-soo-saarka iyo kooxda adeegga iibka.
Tongyida qaadayso Qalabka Group bixin karaan dhammaan qalabka qaadista iyo wax maaraysay buuga aad u baahan tahay qiimo sare leh sida tartan. Iyadoo International ISO Ansixinada nidaamka tayada iyo CE, Sudee, shahaado TUV, Our koox ku faraxsanahay inaan idinku soo dhoweeyo booqo warshad iyo sugaynaa in maqalka aad ka.
Waxaan ku sii dhaganaan in mabda 'ah "tayada marka hore, adeegga ugu horeysay, horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo si ay ula kulmaan macaamiisha ah" iyo "eber iin, eber cabashooyinka" sida Ujeedada tayada.